Apple iCloud | IPhone News (Pejy 2)
Milavo lefona i Apple ary mametraka ny lakilen'ny iCloud any China amin'ny lovia kely
Apetrak'i Apple eo am-pelatanan'ny governemanta Sinoa ny angon-drakitry ny mpampiasa azy rehefa mampiasa mpizara ao amin'ny faritaniny
Ny lohamilina IWork sy Notes dia manana tsy fetezana
Ireo mpizara iCloud dia tsy nanana fahasimbana nandritra ny volana maro, saingy toa efa elaela taorian'ny tranga farany.
Ahoana ny fomba fampifanarahana mora foana ny kalandrie iCloud sy Google
Azavainay ny fomba fampiraisana amin'ny fomba tsotra, tsy misy rindranasa ary maimaimpoana, kalandrie iCloud ary Google Kalandrie
Izany no fiasan'ny fankasitrahana ny tarehy amin'ny Photos
Manazava ny fomba fiasan'ny fanekena tarehy amin'ny Photos for Mac sy iOS i Apple, ary mamafa ny fisalasalana momba ny fanajana ny fiainana manokana
Ahoana ny fanovana ny kaontinao Apple amin'ny iCloud.com
Apple dia mamela anao hampifandray ny kaonty iCloud.com anao amin'ny ID Apple anao. Azavainay ny fomba anaovana azy tsikelikely miaraka amin'ny sary sy ny vokany.
Mampiseho ny fomba hamafana ny kaonty iCloud amin'ny fitaovantsika izy ireo nefa tsy mila mampiditra teny miafina. Afaka mamoha iPhone na iPad ve ianao?
Nofoanan'ny Apple ny safidy fitehirizana 1 TB iCloud ary manolotra antsika 2 TB amin'ny vidiny mitovy
Vao avy nesorin'i Apple ny safidy fitehirizana 1TB, nosoloiny 2 TB tamin'ny vidiny mitovy.
iCloud ho an'ny Windows, izay rehetra tokony ho fantatrao
Hilaza aminao izahay ny fomba fiasan'ny iCloud ho an'ny Windows: ampidino ny programa fitehirizana rahona an'ny Apple ary hianaranao ny fomba handaminana azy tsikelikely.
Ahoana ny fomba hiarovana ny kaonty iCloud anao amin'ny fanafihana sy ny hackers
Azavainay ny fepetra fiarovana lehibe tsy maintsy harahinay mba hampihenana ny risika mety hidiran'ny olona amin'ny data iCloud
Mandà i Apple fa nanagadra kaonty iCloud izy ireo
Nolavin'i Appel fa nisy lesoka tamin'ny fiarovana nanala sarona ny angon-drakitra kaonty iCloud an-tapitrisany
Apple dia misambotra ny sehatra iCloud.net ary manidy tambajotra sosialy eo ambanin'io sehatra io
Apple dia nanitatra ireo domba 170 mahery ananany amin'ny anarana iCloud amin'ny alàlan'ny fividianana ny sehatra iCloud.net ary ny fanidiana ny tambajotra sosialy amin'ity anarana ity.
Apple's Activation Lock mety ho voajirika
Ny Apple Activation Lock dia mety nilefitra ary ny pejy fizahana no antony, izany no nanesoran'izy ireo azy
Voasazy 9 volana an-tranomaizina ilay voampanga faharoa tamin'i #celebgate
Ilay meloka faharoa amin'ny Celebgate dia hita fa meloka ary handany ny 9 volana manaraka any am-ponja
Ahoana ny fomba hamadihana rakikira zaraina ho pejin-tranonkala azon'ny mpampiasa ampiasaina
Manana rakikira zaraina ve ianao ary tianao ho hitan'ny namanao rehetra izany? Atorinay anao ny fomba hamadihana azy ho pejy web.
Azo alaina ho an'ny rehetra ao amin'ny icloud.com izao ny kinova vaovao amin'ny fampiharana tranonkala Photos
Apple dia efa nanao ny kinova vaovao an'ny Photos amin'ny fampiharana tranonkala iCloud ho an'ny mpampiasa rehetra, saingy tonga tsy misy zava-dehibe loatra izany.
Apple dia mandefa vahaolana amin'ny alàlan'ny iCloud mba hialana amin'ny fanasana kalandrie tsy ilaina
Vao avy nandefa vahaolana amin'ny olan'ny spam amin'ny alimanaka iCloud i Apple, vahaolana amin'ny alàlan'ny tranonkala ihany.
Apple manatsara ny sary amin'ny Internet iCloud
Araka ny fampahalalana avy amin'ny MacMagazine, Apple dia manomana fanatsarana vitsivitsy amin'ny fampiharana sary an-tranonkala iCloud; manokana kokoa ho an'ny ...
Apple dia miasa manala ny spam amin'ny fanasana kalandrie iCloud
Nandritra ny herinandro lasa teo, mpampiasa iCloud maro no lasibatry ny spam ...
Nandresy lahatra ahy handoa iCloud ny iOS 10
Ny fahatongavan'i iOS 10 sy macOS Sierra dia nandresy lahatra ahy handoa vola hanitarana ny fahafaha-mitahiry ao amin'ny iCloud noho ireo fiasa vaovao
Apple dia mandefa ny drafitra iCloud 2TB ho an'ny Keynote
Amin'ity drafitra fitahirizana vaovao ity dia hanana toerana hatramin'ny 2TB amin'ny mpizara iCloud anao mandritra ny 20 euro isam-bolana.
Mitaraina ireo mpampiasa manana iOS 10 fa voasakana ny Apple ID
Mpampiasa maro miaraka amin'ny iOS 10 napetraka no mimenomenona fa tsy afaka miditra amin'ny kaonty Apple noho ny fanakanana tsy misy vahaolana mety
Ny iray hafa voampanga ao Celebgate dia niaiky ny helony
Ny voampanga faharoa tamin'ny famoahana ny sarin'ireo olo-malaza any Hollywood dia niaiky ny heloka vitany ary higadra 5 taona an-tranomaizina
iCloud Drive ao amin'ny iOS 10 sy macOS Sierra, izay nandrasan'ny maro amintsika
macOS Sierra sy iOS 10 dia mitondra fanovana lehibe amin'ny iCloud Drive, izay tena safidy hafa amin'ny Dropbox, Box ary Google Drive.
Manana iPhone mihidy amin'ny iCloud ve ianao? Azo vohana ve ny iCloud? Fantaro ny fomba famohana azy sy ny fomba ahafahanao manala ara-dalàna ny hidin-trano iCloud.
Serivisy, loharanom-bola lehibe manan-danja ho an'i Apple
Ny serivisy dia nanjary iray amin'ireo loharanom-bola lehibe an'i Apple, efa mihoatra ny iPad sy Macs
iCloud, Google Photos, Flickr, ary Amazon Cloud Drive: Aiza no hampiakarako ny sariko?
Mampitaha serivisy fitehirizana sary rahona efatra izahay: iCloud Photo, Google Photos, Amazon Cloud Drive ary Flickr, ny tombony sy ny fatiantoka entiny.
Apple dia tokony hampitombo ny fahaizan'ny iCloud
iCloud dia mila manova ny drafitra vidiny ary manolotra ny mpampiasa fahafaha-mitahiry lehibe kokoa, angamba mifandraika amin'ny fitaovan'izy ireo.
Ahoana no fomba hamoronana kaonty Apple ho an'ny ankizy iray amin'ny fampiasana Family Sharing
Azavainay ny fomba fampiasana En Familia hamoronana kaonty Apple ho an'ny zaza tsy ampy taona, hifehezana ny fampidinana azy ireo ary hizara ny fividiananao.
Apple dia manana tetikasa enina fotodrafitrasa enina ao anaty rahona ka tsy misy afaka miditra iCloud
Araka ny tsiliantsofina re, Apple dia manana tetikasa hatramin'ny enina hamoronana fotodrafitrasa iCloud azy manokana mba tsy hisy olona hiditra amin'ny angonao.
iOS 9.3 dia hiaro ny kopian'ny iCloud amin'ny teny miafinao
Ny FBI sy Apple dia be resaka loatra tato ho ato. Amin'izao fotoana izao ireo kopia azontsika atao amin'ny ...
Niampanga ny helony ny mpiaro an'i Celebgate
Herintaona sy tapany lasa izay, tamin'ny septambra 2014, sary an-jatony akaiky an'ireo olo-malaza manan-danja indrindra no tafaporitsaka ...
Apple dia miasa mba hahatonga ny iCloud tsy hiditra
Apple dia miasa sahady amin'ny fampitomboana ny fiarovana ny iCloud ka hatramin'ny tsy ahafahan'izy ireo miditra ...
Ny backup backup ICloud dia tsy azo antoka toy ny fitaovana iOS hamerenana amin'ny laoniny ny angona
Apple dia afaka mamaha ny backup iCloud ary manome ny fampahalalana amin'ny manampahefana rehefa nasaina nanao izany tamin'ny alàlan'ny baikon'ny fitsarana.
Ny backup backup ICloud dia tsy azo antoka toy ny ao an-toerana mba hamerenana amin'ny laoniny mora foana
Nilaza i Apple fa tsy azo antoka toy ny eo an-toerana ny famerenana iCloud hanamorana anay ny famoahana ny atiny amin'ny rahona.
Apple dia te hiditra ao anaty rindrambaiko iCloud
Te-hamoha malalaka ny fitaovana ny FBI, saingy mikasa ny hamorona fitaovana enkripsi sy iCloud encryption i Apple izay tsy ho tafiditra ao aminy mihitsy ny Apple.
Apple hanokatra foibe data vaovao ao Reno
Rehefa mbola tsy vita ny ivon-kevitra voalohany ao Reno dia mikasa ny hanangana ivon-data vaovao lehibe kokoa i Apple.
Ahoana no hanafenana ireo boky iCloud ao amin'ny iBooks
Raha mampiasa iBooks tsy tapaka ianao, nefa te hanafoana ny fisehon'ny boky iCloud rehetra amin'ny alàlan'ny default, dia manolotra fampianarana 4-dingana izahay anio.
Ahoana no manamboatra iPhone izay mangataka hatrany ny anaranao iCloud sy ny teny miafinao
Indraindray misy iPhone miditra amina loop izay manontany hatrany ny antsipirian'ny fidiranao iCloud. Miaraka amin'ny fanampian'ny Actualidad iPhone dia afaka mamaha azy ianao.
Ahoana ny fomba fisafidianana tanana izay fampiharana azo alefa amin'ny iCloud
Rehefa mampiasa iCloud ianao hamerenana ny fitaovan'ny iOS anao, ireo rindranasa hapetrakao dia haverina ao anaty iCloud.
Ireo mpampiasa IPhone 6s dia mitatitra ny fahaverezan'ny hafatra sy ny antso rehefa mamerina ny dika mitovy amin'ny iCloud
Ny mpampiasa sasany izay manana iPhone 6s na iPhone 6s Plus dia mitory antso sy hafatra very rehefa mahazo kopia avy amin'ny iCloud.
Mendrika ny hividy tahiry iCloud fanampiny ve ianao?
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia manampy anao izahay manapa-kevitra raha mendrika ny mividy fitehirizana iCloud fanampiny ho an'ny fitaovanao iOS.
Fampitahana ireo serivisy fitahirizana rahona
Fampitahana izay anehoanay anao ny vidiny ankehitriny amin'ny serivisy fitehirizana rahona lehibe
Ahoana ny fanovana ireo fitaovana Apple natokanao
Ny fanananao ny lisitry ny fitaovana atokisanao no havaozina no fomba tsara indrindra hiantohana fa azo antoka ny angon-drakitrao
Apple manavao ny iCloud ho an'ny Windows miaraka amina endrika vaovao maro
Ny fampiharana iCloud ho an'ny Windows dia misy miaraka amin'ny iCloud Photo Library mba hitrandrahana betsaka indrindra amin'izany.
«Mitadiava namana» izay azo alaina ao amin'ny tranonkala iCloud.com izao
Manomboka anio, ny safidy "Find Friends" dia azo alaina ao amin'ny tranokala iCloud.com.
Ahoana ny fomba hijerena ireo rakitra iCloud Drive amin'ny fitaovanao
Miaraka amin'ny iOS 9 dia misy ny fahitana ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra voatahiry ao amin'ny iCloude Drive amin'ny iPhone, iPod touch, iPad, ary na dia amin'ny Mac aza
iOS 9 dia mbola mavesatra noho ny tsy fahombiazan'ny iCloud
iCloud dia tompon'andraikitra amin'ny iOS 9 manohy mandanja mihoatra ny nampanantenain'i Apple. Ny marimarina kokoa, bibikely ao amin'ny rahon'i Apple.
Nampandrenesin'i Apple ireo mpampiasa iCloud amin'ny fanovana fitehirizana
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, Apple dia nanambara ny fitomboan'ny habaka fitehirizana mandritra ny lahateny farany izay ...
iCloud dia efa mamela antsika hamerina ny fifandraisana sy ireo karazana rakitra voafafa
Afaka mamerina ny fifandraisana sy ny fisie ary ny kalandrie avy amin'ny iCloud isika izao mba tsy hanahy momba ny famoizana an'ity karazana data ity intsony izahay
Apple dia mamela anao hamerina amin'ny laoniny ireo rakitra iCloud voafafa, fifandraisana, kalandrie ary fampahatsiahivana
Nanampy fiasa vaovao i Apple izay ahafahanao mamerina rakitra, fifandraisana ary kalandrie voafafa avy amin'ny iCloud.
Apple Watch dia mbola tsy hita ao amin'ny Activation Lock
Apple Watch dia mbola tsy miseho tsara amin'ny pejy iCloud Activation Lock
Apple dia mikasa ny hanatsara ny fotodrafitrasa fitehirizana iCloud
Apple dia hamoaka vola $ 3.900 miliara hanatsarana ny fotodrafitrasa iCloud, izay hitondra fitomboana haingana sy fitoniana ho an'ireo mpampiasa
Sarin'i Google? Aleo mieritreritra indroa alohan'ny hampiasanao azy
Google Photos dia mamela anao mampakatra ny tranombokinao feno sary amin'ny mpizara azy, tsy misy fetran'ny habaka ary maimaim-poana, fa inona no azony atao ho setrin'izany?
Ahoana ny fomba hamafana sy hahitana sary sy horonan-tsary avy amin'ny iCloud.com
Raha, amin'ny antony rehetra, te-hamafa na hamerina sary sy horonan-tsary izahay dia afaka manao izany amin'ny navigateur avy amin'ny iCloud.com amin'ity boky ity.
Fetsy ho an'ny iOS 8 (I): esory ny habaka iCloud
Torohevitra hitantanana tsara kokoa ny habaka iCloud sy hanafoanana toerana
Fanamarinana dingana roa amin'ny FaceTime sy iMessage
Apple dia manapa-kevitra ny hanome ny fepetra fanamarinana dingana roa amin'ny serivisy FaceTime sy iMessage fanta-daza, sahala amin'ny efa ao amin'ny iCloud.
Ahoana ny fomba hanondranana ireo fifandraisana voatahiry ao amin'ny iCloud
Ianaro ny fomba hanondranana ireo fifandraisana voatahiry ao amin'ny iPhone na iPad anao amin'ny endrika vCard amin'ny tontonana iCloud.com.
Zavatra 7 tokony ho fantatrao momba ny iCloud Photo Library
Azo antoka fa mpamaky maro no efa mahalala ny fiasan'ny iCloud Photo Library ao amin'ny iOS 8, fa ireo izay tsy afaka mahita ny momba azy rehetra amin'ity lahatsoratra ity.
Fitaovana vaovao hanenjehana tenimiafina iCloud hita
Vao tsy ela akory izay ny fandrahonana fiarovana iCloud vaovao nipoitra niaraka tamin'ny fitaovana fanafihana mahery vaika vaovao.
Ahoana ny fomba fampidirana sary ao amin'ny tranokala iCloud Drive avy amin'ny tranokala
Fametrahana ICloud Photo Library ary fampiasana torolàlana handefasana sary ao amin'ny iCloud Library avy amin'ny Mac amin'ny fampiasana Internet Browser
Ny lakilen'ny "Delete" dia tsy mamafa ny sary iray manontolo na avy hatrany, raha ampidirintsika ao amin'ny iCloud ny kopia dia sarotra ny iraka. Mianara manao azy farany
Toy izao no fiasan'ny Photos in iCloud
Ny sary safidy vaovao ao amin'ny iCloud izay ampandehanana amin'ny iOS 8.1 amin'ny antsipiriany
Ahoana ny fomba hanesorana ny kaonty iCloud amin'ny iPad
Mba hanovana ny ID Apple an'ny fitaovantsika dia tsy maintsy mamafa ny kaonty iCloud an'ny fitaovantsika aloha. Atorinay anao ny dingana manaraka.
Ahoana ny fomba hamoronana tenimiafina manokana ho an'ny iCloud
Raha te hiditra iCloud amin'ny fampiharana tsy mahazaka fanamarinana roa dingana isika dia tsy maintsy mamorona teny miafina manokana
Apple nandefa fitaovana hijerena ny hidim-baravaran'ny iCloud
Apple dia mandefa fitaovana vaovao hanamarinana ny hidin'ny iCloud amin'ny fitaovana alohan'ny hividianana azy
Raha mividy iPhone fanindroany ianao dia zahao raha voahidy
Apple dia nandefa fitaovana an-tserasera hanamarina raha misy iPhone na iPad voahidy, manakana ny fampandehanana azy nefa tsy mahafantatra ny teny miafin'ny Apple ID
Ahoana ny fampiasana iCloud Drive
Raha mbola tsy nianatra momba ny serivisy rahona ianao taorian'ny hadisoana taloha toy ny MobileMe, dia tokony hanandrana ny iCloud Drive ianao.
Afaka miditra amin'ny sary iCloud avy amin'ny mpitety
iCloud.com dia afaka mampiseho ny sarinay voatahiry ao amin'ny rahona Apple
Drafitra fitahirizana ICloud: Iza amin'ireo no hofidiana?
Manampy anao izahay hisafidy izay mety ho drafitra fitahirizana iCloud tsara indrindra arakaraka ny fampiasanao ny fitaovanao.
Ahoana ny fomba hananganana iCloud Drive amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 8
Ampifanaraho amin'ny dingana roa ny iCloud Drive, tsotra sy mahasoa izy io na dia mbola mitaky an'izany aza ny fifandraisana misy eo amin'ny iOS8 sy OS X Yosemite.
Arovy amin'ny dingana mora telo ny sarinao
Mianara fomba telo hiarovana ny sarinao amin'ireo hacker tsy mahay mandanjalanja, misy safidy ho an'ny rehetra sy ny tsotra rehetra ampiharina.
Fitaovana forensika ampiasaina amin'ny famotopotorana ny halatra miboridana farany teo
Ny fitambaran'ny karazana rindrambaiko azo idirana roa dia namorona onjan'ny hacks. Ho hitantsika tsirairay ny fitaovana ampiasaina amin'ity fanafihana ity.
Voasimba ny filaminana ICloud ary tafaporitsaka ny sary akaiky an'ireo olo-malaza
iCloud dia nahazo fanafihana mpijirika izay mahavita maka sary an'ireo olo-malaza mitanjaka na mitokana. Averina indray, ny fiarovana ny serivisy hiadian-kevitra.
Ahoana ny fomba hamafana ireo rakitra sy data avy amin'ny iCloud mankany amin'ny habaka malalaka
Raha te hamafa ny fisie sy ny angona avy amin'ireo apps amin'ny fitaovantsika izahay, izay maka habaka ao amin'ny iCloud, dia tsy maintsy mamafa azy ireo amin'ny iDevice isika
Ahoana ny fomba hamafana ireo backup taloha avy amin'ny iPhone
Ianaro ny fomba hamafana ireo kopian'ny backup amin'ny iPhone na iPad amin'ny fomba tsotra sy mora, tsy mila manitatra tahiry ianao, tantano fotsiny izany.
Ahoana ny fomba hamafana ny Apple ID anao ary hampifandray kaonty mailaka hafa aminy
Fafao ny kaonty mailaka mifandraika amin'ny ID Apple ary manampia kaonty vaovao, tazomy ny fividiananao rehetra.
Ahoana ny famerenana iPhone, iPad na Mac nangalarina na very.
Ny fahitana ny iPhone, iPad ary iPhone very na nangalarinao dia azo atao noho ny safidy "Find my iPhone"
Bibikely ao amin'ny iOS 7 mamela anao hanafoana ny Find my iPhone tsy misy teny miafina
Misy lesoka lehibe hita tao amin'ny iOS 7. Ity lesoka ity dia ahafahantsika mamono ny safidy "Tadiavo ny iPhone" raha toa ka mila manoratra ny teny miafinay izahay.
Fa maninona no tokony hifamadika amin'ny iCloud ianao aorian'ny politika Gmail vaovao?
Ny safidy default vaovao ao amin'ny Gmail dia ahafahan'ny tsirairay mifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny Google Plus. Manampy isa amin'ny safidy iCloud ny tsy fisian'ny tsiambaratelo.
Ahoana ny fikirakirana ny backup iCloud
Mampiseho ny fomba fanamboarana ny backup iCloud izahay, mba hitantanana tsara kokoa ny fitehirizam-bolanay
Ny fiarovana ICloud dia manasarotra ny tsena faharoa
Ny rafitra fiarovana vaovao an'ny Apple dia manasarotra ny fahazoana iPad faharoa na iPhone
Inona no antenaintsika amin'ny WWDC 2013?: Serivisy
Mbola misy herinandro iray sisa tavela ho an'ny WWDC 2013, ny hetsika andrasana indrindra amin'ny taona. Inona no antenaintsika?
Raiso ny mailaka GMail amin'ny iCloud miaraka amin'ny Push
Nesorin'ny GMail ny fanohanana ny fifanakalozana ary very ny fanerena anay. Amin'ity "fikafika" ity dia afaka mamerina azy amin'ny alàlan'ny kaonty iCloud-nay isika.
Ampifanaraho amin'ny safidinao rehetra amin'ny alàlan'ny iCloud ny Safari
iCloud dia mamela anao handrindra ny tsoratadidin'ny Safari, ny lisitry ny famakiana ary ny fisokafanao hisokatra manerana ny fitaovanao rehetra
Apple dia nanangana fanamarinana dingana roa vaovao ho an'ny Apple ID sy iCloud
Apple androany dia nanangana fomba fanamarinana vaovao ho an'ny kaonty Apple ID sy iCloud misy ...
Apple dia miaina olana amin'ny App Store sy iCloud
Ny fitantanana tsara ny 5GB izay atolotry ny iCloud antsika dia zava-dehibe mba hananana toerana malalaka ho an'ny famerenana ireo fitaovana.
Documents, fampiharana tsara hitantanana antontan-taratasy
Ny antontan-taratasy avy amin'i Readdle dia fampiharana tena tsara hampidina, hijerena ary hizarana antontan-taratasy, horonan-tsary ary feo, ary maimaim-poana koa izany.
Azonao atao izao ny mahazo ny mailakao "@ icloud.com" miaraka amin'ny beta vaovao amin'ny iOS 6.0
Afaka mahazo ny mailakao "@ icloud.com" ianao izao
Ahoana ny fomba ahazoana mailaka «@ icloud.com» misaotra ny iOS 6 beta 3
Apple dia nanomboka namela ny mpampiasa hisoratra anarana amin'ny adiresy mailaka ao ambanin'ny sehatra "@ icloud.com" noho ny iOS 6 beta 3.
Fanadihadiana mandritra ny herinandro: mampiasa iCloud na Dropbox bebe kokoa ve ianao?
Nanambara i Tim Cook tamin'ity herinandro ity fa ny Apple Cloud, iCloud, dia efa nahatratra ny vola mitentina 100 tapitrisa ...
Fampianarana: velomy ny fampifanarahana mandeha ho azy ny fampiharana amin'ny iCloud
Raha te hanomboka hampiasa ny fampifanarahana mandeha ho azy ny rindranasanay amin'ny alàlan'ny iCloud ianao dia mila manaraka ireto dingana manaraka ireto fotsiny:…